UBelkin Uvula i-adaptha yokushaja engu-3,5mm + ye-iPhone | Izindaba zamagajethi
UBelkin wethula i-adaptha yokushaja engu-3,5mm + ye-iPhone
Ngonyaka odlule, ngokufika kwe-iPhone 7 ne-iPhone 7 Plus, i-Apple yathatha isinyathelo sokuqeda isixhumi esijwayelekile se-3,5 mm jack. kuma-headphone anomqondo wokuthi khuthaza ukusetshenziswa kwamahedfoni angenantambo, njengama-AirPod, ngokweqhinga, awethula ngalolo suku olufanayo. Enye indlela bekungukusebenzisa i-Lightning to Jack adapter (ukusebenzisa noma iyiphi imodeli yamahedfoni), uzitholele ama-headphone athile ngesixhumi se-Lightning. Manje sesinenye inketho.
Inkampani yezesekeli eyaziwayo iBelkin yethule uhlelo lwe- I-adaptha yomsindo eyi-3,5mm + ishaja I-RockStar, isesekeli esincane esizokuvumela ukuthi ukhokhise i-iPhone yakho futhi usebenzise ama-headphone ngesixhumi esijwayelekile ngasikhathi sinye. Into efuna ukwazi kakhulu, ngaphezu kwentengo yayo ephezulu, ukuthi I-Apple nayo isiqalile ukuyithengisa ezitolo zabo.
Lalela umculo bese ukhokhisa i-iPhone yakho ngasikhathi sinye ne-adaptha ye-Belkin RockStar
Akungabazeki ngokusebenziseka kwale nsiza entsha uBelkin ayilethe emakethe yemod? intengo ye- I-34,99 euro Kodwa-ke, kuyaxaka ukuthi, ngaphansi kwesizathu sokuqeda izintambo ezimpilweni zethu, i-Apple ithengisa lokhu okusetshenziswayo ezitolo zabo. Woza, kuyasicindezela ukuthi sishintshe ikhebula ebelikade limahhala kokutholakalayo manje okusibiza ngama- € 34,99. Yebo, ngiyazi ukuthi umenzi akayona i-Apple, kepha inkampani yaseCupertino iyakwamukela kokubili ngophawu lwe-MFi nangokuyithengisa ngqo.
Okusha I-RockStar UBelkin ubukeka njengokuthile okuvela efektri ka-Apple uqobo. Kwi isiphetho esimhlophe esimhlophe, unomphetho owodwa a isixhumi sombani wesilisa ukuthi uxhuma ku-iPhone 7 yakho, 7 Plus, 8, 8 Plus noma i-X. ngakolunye uhlangothi inikeza isixhumi sombani wesifazane kanye ne-3,55 mm jack plug. Ngale ndlela ungaxhuma ibhethri langaphandle noma uyixhume kumandla kagesi, ngenkathi ulalele umculo wakho owuthandayo ngamahedfoni noma izipikha.
Ucabangani ngalo mbono? Ingabe uhlela ukuthola le adaptha?
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Gadgets » Izesekeli » UBelkin wethula i-adaptha yokushaja engu-3,5mm + ye-iPhone
UManolo Lama ubalekela bukhoma, sizoba neFIFA World Cup 2018
Sihlaziya i-S-Box, ilebula elimhlophe le-TV Box nokusebenza okuhle